धर्मको कुरा, शर्मको कुरा
सधैँको जस्तो एउटा साधारण दिन थियो। हतार हतार ट्रेन समात्नु अनि केही स्टेसन पर ओर्लिएर अर्को बस समात्नु। त्यसपछि झन्डै १० मिनेट हिँड्नु। यत्ति गरे पछि कार्यस्थल पुगिन्छ। 'कार्यालय' भन्न मेरो नेपाली 'माईण्डसेट'ले दिँदैन। किनकी घुम्ने कुर्ची पछाडी मैलो तौलिया झुन्ड्याएको छैन। पहिलो कुरो त कुर्ची नै छैन। खैर, म अहिले ट्रेनको आरामदायी सिटमा छु।
'म भर्खर ट्रेन चढेँ, अब केही बेरमा काममा पुग्छु, खाजा बाहिरै खाएँ' लगायतको पछिल्लो विवरण श्रीमतीलाई फोनमा पेश गर्दै थिएँ। आफूतिर फर्केको अघिल्लो सिटमा दुई जवान आएर बसे। खासै नोटिस गर्नुपर्ने केही छैन। वास्तवमा यात्रा गर्दा कसैको आँखा तिर झुक्किएर हेरेमा तुरुन्तै अन्त मोड्ने चलन छ। सबै भन्दा सभ्य तरिका भनेको गाडीमा चढ्ने बित्तिकै दायाँबायाँ नहेरी कुनै काम नभए पनि मोबाईल झिकेर घोसेमुन्टो लगाउनु हो। विदेश आएर सिकेको पहिलो 'सो कल्ड' सभ्यता यहि हो। मैले फोन राख्ने बित्तिकै यूट्युब खोलेँ। हेडफोन लगाएँ। गोपाल योन्जनले आफ्नो पछिल्लो अन्तरा गाउनै लागेका थिए, सामुन्ने मुख फर्काएर बसेका एक जवानले अघिदेखि म तिर इशारा गर्दै केही भनिरहे जस्तो लाग्यो। त्यसपछिको वार्तालाप जस्ताको त्यस्तै-
"एक्स क्युज मी, मलाई केही भन्नुभएको हो?"
"हो, तपाईंलाई नै हो। तपाईंसंग केही समय छ भने हामी तपाईंलाई परमेश्वरको शुभ समाचार सुनाउन चाहन्छौं।"
मैले एकछिन गम खाएँ। त्यस्तो कुन समाचार रहेछ परमेश्वरले मलाई सुनाउन बाँकी? सम्पूर्ण मानिसका पाप सँगालेर मुक्ति दिन प्रभु यशु उहिल्यै क्रसमा टाँगिएका हुन्। मैले केही सोध्नुअघि उसैले सोध्यो-
"तपाईंलाई जिजस क्राइष्टको बारेमा थाहा छ?"
"तपाईंलाई जत्ति त नहोला, तर उहाँको बारेमा मलाई आवश्यक पर्ने जत्ति चाहिँ थाहा छ।" मैले बिस्तारै वरिपरि हेरेर जबाफ दिएँ।
"त्यसोभए उहाँ किन क्रसमा चढ्नुभयो भन्ने थाहा होला, हैन?"
"क्रसमा उँहामात्रै होइन, अरू पनि चढेका हुन्। त्यो बेला शाषकले भनेको नमान्ने सबैलाई त्यस्तै सजाय हुन्थ्यो। तर जिजस चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेको मुक्तिको लागि चढे भनेर बाइबलमा लेखेको छ।"
"तपाईंले बाइबल पढ्नुभएको छ?", उसले शंका मिश्रित भावमा आँखीभौं उचाल्दै सोध्यो।
"पढेको छु। 'भर्स'हरु कण्ठस्थ त आउँदैन, तर जम्माजम्मी कथाको सार जान्दछु।"
"तपाईं कुन देशबाट आउनुभएको र कुन धर्म मान्नुहुन्छ?", उसले ठाडो प्रश्न सोध्यो। प्राय मिसिनरीहरु ज्यादै नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्थे।
"म नेपालबाट हो, र धर्मका बारेमा म भन्न चाहन्न, व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरो हो।"
"ल ठिकै छ, तर धेरैजसो नेपाली हिन्दु हुन्छन्। मैले फिनल्याण्डमा भएको आधा नेपालीसँग कुरा गरिसकेको छु। हिन्दु भएपनि सबैले जिजसलाई महान भगवान मान्छन्। कतिले त 'बुबा आमाको करले हिन्दू संस्कार मानेको हुँ, क्रिश्चियन बन्ने सोच्दै छु' समेत भनेका छन्।"
"ए... धेरै राम्रो, नेपालीलाई राम्रोसँग चिन्नुभएछ।" मैले हाँस्दै भनेँ। (हाँस्न मन लागेर होइन, वार्तालाप नराम्रो सुनिएला भनेर)। हेर्नुस, ईतिहासमा कयौं राम्रा मान्छेहरू जन्मिएका थिए, तिमध्ये एक जिजस हुन्। समाजको लागि राम्रो गरे होलान्| तर अब उनको फुलबुट्टासहितको कथा तपाईंले यसबेला 'पि-ट्रेन'मा मलाई पढाएर खास उपलब्धि छैन। राम्रो काम गर्नेहरुलाई म नमन गर्छु। कथम कदाचित कुनै दिन, मलाई उनको बारेमा थप कुरा जान्न मन लागेछ भने, म गुगल गरौंला, त्यहाँ अथाह जानकारी छन्।"
"त्यो त हो।" केटो फिस्स हाँस्यो।(मलाई थाहा छ, उसलाई पनि रमाईलो लागेर होइन)
चाहेको भए वार्तालाप यहीँ टुंगिन सक्थ्यो। तर म ओर्लिने स्टप आउन अँझै केही समय बाँकी थियो। गोपाल योन्जनलाई सुन्न नदिएको झोँक उतारौं भन्ने लाग्यो। 'चल भाइ अब मेरी वारि' भन्ने स्टाइलमा सुरु गरें-
"तपाईंहरु दुबैजना फिनिश हो?"
"होईन, म चाहिँ अमेरिकन हो, ऊ फिनिश हो।" अर्को साथीको सट्टा पनि उसैले बोल्यो। सुरु देखिनै चुपचाप बसेर छेउको फिनिश केटोले आफ्नो जात त जनाईसकेको थियो। ट्याउँ ट्याउँ बोल्ने चाहिँ अमेरिकन रहेछ।
"अनि कहिलेदेखि यो धर्म प्रचारको काममा लाग्नुभएको? यो जागिर हो कि स्वयंसेवा मात्रै?"
"हाई स्कूल सकेर म यसमै फुल-टाईम लागेको हुँ। जिजसको सन्देश विश्वभरि फैलाउन प्रभुले मलाई चुन्नुभएको छ। संसारको धेरै देशमा पुगेर यो पवित्र काम सम्पन्न गरेको छु, अँझै गरिरहने छु।"
"अनि विभिन्न देश चाहार्दा प्लेन टिकट, होटेल खर्च, आदि कसले व्यहोर्छ? मिसनरीमा पैसा कसरी आउँछ, थाहा छ?"
"अच्छा, यसमा थप अरू केही टिप्पणी गर्दिन। तर एउटा कुरा बताउनुस, तपाईंलाई अहिले कुनै अर्को धर्मको प्रचारक आएर अल्लाहको, श्रीकृष्णको, वा अरू कसैको गुणगान गायो र धर्म परिवर्तन गर भन्यो भने कस्तो लाग्छ?"
यसको उसले ठोस उत्तर दिएन। बरु कुरा घुमाएर उनीहरू पनि राम्रो मान्छे होलान्, सम्मान गर्छु भन्यो। अल्लाह उसले सुनेको रहेछ, श्री कृष्ण भन्न जानेन।
"यि सि-किस्न भनेका को हुन्?" मुस्लिम धर्मकै कोही होलान् भनेर डराई डराई भन्यो।
"हेर्नुस, म एउटा देशबाट, एउटा धर्मबाट आएको मान्छे, तर पनि अर्को देशका बारेमा, धर्मका बारेमा सामान्य जानकारी राख्छु। तर तपाईं एउटा किताब घोकेर त्यही साँचो हो भनेर संसारलाई सिकाउन हिँड्नु भएको छ। कमसेकम अरू धर्मका सामान्य जानकारी लिनुस। तर्क दिन पनि काम लाग्छ। खैर, तपाईंको यो पेशा राम्रो रहोस्। शुभकामना छ।"
यत्ति भनेर आफ्नो स्टेसनमा म ओर्लिन तयार भएँ। उसले अनुहार रातो बनायो। करिब ३० सेकेन्ड जति माहोल 'पज' भयो। यसलाई राम्रो सबक सिकाएँ भनेर दंग पर्दै म ट्रेनको ढोकानेर पुगेँ।
(यो घटना विवरण यत्तिकै सक्न पनि सकिन्थ्यो। धर्मको कुरो गरिहालियो, अन्तिमको शर्मको कुरो नलेखी पुरा हुँदैन)
बाहिर हेर्छु त अर्कै स्टेसन पो छ। त्यसलाई लेक्चर दिने चक्करमा एउटा स्टप काटेर आईसकिएछ। काममा ढिला हुने भईयो। मेरो अनुहार रातो भयो। मैले फेरी उल्टो जाने ट्रेन लिएँ। ति दुई केटाहरुले आशा छ, बाइबल झोलामा राखेर आफू ओर्लिने सहि स्टेसन याद गरे होलान्।
"राजनीतिमा लाग्नुस, पछुताउनु हुन्न"।
"दाइ नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ?"
धेरै पहिलेदेखिनै चिनजान भएझैं कसैले फेसबुकमा सोध्यो। "दाइ खाना खानु भयो? के छ हालखबर?" यस्ता थप म्यासेज अईरहे। नाम बिशाल गुरुङ। यो नामको मेरो कोहि साथी थिएन। नचिने पनि किन रुखो हुनु। तर पनि सकेसम्म एक-एक शब्दको उत्तर फर्काईरहें। म घरमै खाना बनाउँदै थिएँ। धेरैबेर सम्म उसको म्यासेज आएन।
"दाइ, हामी त बिजोग छौं दाइ।" खाना खाईसक्न लाग्दा फेरी उसको म्यासेज देखापर्यो।
जसरि मान्छे आत्तिएको बेला स्वर कम्पन हुन्छ, उसका शब्द त्यस्तै थिए।
"किन के भयो र?"
"बुझ्दै नबुझी रसिया आईयो दाइ, बिजोग भयो यहाँ। काम छैन, खर्च सकियो। कुकुरको जुनी भएको छ।"
म आबद्द समाजसेवी संस्थाको पेज होस् या आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक, यस्ता म्यासेजहरु बारम्बार अईरहन्थे। गए बर्ष मात्रै सयौं नेपाली अबैधानिक तवरबाट युरोप छिरेर "असाईलम" आबेदन गरेका थिए। ति देशका सरकारले धेरैलाई 'शरणार्थी मान्यता दिन नसकिने' भन्दै फिर्ता पनि पठाईदिएको थियो। यो क्रम फाट्टफुट्ट अँझै देखिएको छ। त्यहि मेसोमा कति नेपाली साथीभाइले 'लुकेर बस्ने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्न?' भन्ने आसयको म्यासेज पठाउँथे। त्यस्तै मध्ये कोहि होलान। टाईप गरेर कति सम्झाउनु भनेर "भाइ, कल गर्नुस" भनें।
"नेपालबाट रसिया कसरि आईपुग्नुभयो? मेनपावरबाट हो?"
"दाइ ठ्याक्कै १५ लाख खर्च भएको छ यहाँ आउन।"
सबैभन्दा मुख्य कुरो पैसाको थियो, उसले पहिला त्यहि सुनायो।
"मेनपावरबाट होइन दाइ। मेरो काठमाण्डौमा एकजना एकदम मिल्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। एकदमै माइ-डियर दाइ। आम्मा कसम खान सक्छु, मलाई कहिल्यै नराम्रो सोच्न सक्नुहुन्न उहाँले। तर मलाई यहाँ ल्याउने त्यो दाइको साथीले हो। दाइको साथी मस्कोमा रहेछ। महिनाको ८० हजार हुन्छ भन्यो। आउन त 'वार्किङ भिषा' मै आएको नि। काम सुरु गरेपछी बस्नलाई फ्ल्याटनै दिन्छ भन्यो। हिउँ परेको बेला बिदा हुन्छ भन्यो। अँझ दाइ त्यसले त २-४ बर्षमा यहिँको खैरेनी केटि बिहे गर्न मिल्छ भन्यो।" प्रसंग अघिपछि केहि हिसाब नगरेर उसले एकै सासमा सुनायो|
"अनि रसियन एम्बेसीमा के भनेर भिषा लाग्यो त? केहि सोधेन?"
"तिनीहरुको सबै सेटिंङ हुँदोरहेछ। नक्कली कम्पनि, नक्कली कर्मचारी, नक्कली छाप, सब चिज नक्कली। काठमाण्डौको रसियन दुताबासले एक शब्द पनि नसोधी भिषा दियो। भिषा लागेको दिन १५ हजारको पार्टी गरें दाइ। उँड्ने दिन एयरपोर्टमा तिनीहरुको एजेन्टले 'तिमिहरुको त अब लाईफ बनिहाल्यो, हामीलाई यसो चिया खाजा' भन्दै ५/५ हजार मागे। लौ त नि, डलर छापिहालिन्छ, यो नाथे ५ हजारको के लोभ भनेर खुसि खुसि तिनीहरुको खल्तीमा हालियो।
अहिले सम्झिंदा हाँसो लाग्छ, दुखको खाडलमा जाक्किन जाँदा पनि टिप्स र बक्सिस दिंदै पो आएछौँ।"
म हाँसे, उ पनि फिस्स हाँस्यो।
"आफू कुन ठाउँमा जाँदै छु, पछि काम कस्तो पाईन्छ, केहि बुझ्नुभएन?"
"तिनीहरुको एजेन्टले भनेको बिश्वास गर्न परिहाल्यो, हामीले कसरि बुझ्ने विदेशको कुरो दाइ।" उसले बडो बालसुलभ स्वरमा भन्यो।
मलाई अलिकति झोंक चल्यो, थोरै कड्किदै सोधें- "तपाइँलाई फेसबुक चलाउन आउँछ?"
"किन नआउनु दाइ यो जाबो फेसबुक, भाईबर, ट्वीटर, जम्मै चलाउन आउँछ। आइ.ए. सम्म त पढेको छु नि।"
"अनि इन्टरनेट खोलेर सबै गर्न आउँदो रहेछ, आफू कहाँ जाँदै छु, त्यहाँको कुन कम्पनि हो, त्यसको वेबसाईट मागेर हेर्न जान्नुभएन? दुताबासमा भिषा एप्लाई गर्दा काम, बस्ने ठाउँ, इन्सुरेन्स, सबै कुरो खुलाएको हुन्छ त।"
"कहाँ त्यस्तो झन्झट गरियो र, आफ्नै हितैषी ब्रदरले ओके भनेपछि ओके भनेर झ्याप्पै हिंडीयो नि! रसियाको राजधानी शहर हो, ठाउँ एकदम राम्रो छ। काम टन्न पाईन्छ। लगभग युरोप जस्तै हो, अलि अलि जाडो हुन्छ भनेको थियो उताबाट।"
अब मलाई रिसाउन नि मन लागेन। युरोपकै धेरै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउनेहरुले त झन्झट नहोस भनेर कन्सल्ट्यान्सीलाई झन्डै एक लाख बुझाउँछन्। जसको काम भनेको नयाँ ईमेल एकाउन्ट खोलेर युनिभर्सिटीमा ईमेल पठाउने मात्रै हो। सबै कुरो त वेबसाईटमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। अधिकांस समय फेसबुकमा झुन्डिने, अंग्रेजी गीतको चार्ट अपडेट भइरहनेलाई त 'फर्स्ट ह्याण्ड इन्फर्मेसन' खोज्न जाँगर चल्दैन। 'वर्किङ्ग भिषा'मा जाने साथीभाइलाई कसरि मेसो रहोस।
"अनि अहिले कस्तो अवस्था छ त?"
"अवस्थाको कुरै नगर्नुस, हामी जस्तो त यहाँ झन्डै हजार-१२ सय रहेछन। एकदम थोत्रो बिल्डिङको अँध्यारो कोठामा राखेको छ। सानो कोठामा हामी ९ जना बस्छौं। त्यो एजेन्टले एयरपोर्टबाट ल्याएर यहाँ छोडेदेखि देखा परेको छैन। रसियनहरु पनि मिलेका हुँदा रहेछन।
आपत पर्दा नेपाली साथीभाइ गुहार्ने हो। धेरै दाइहरुले हाम्रो समस्या सुन्छन, अनि काम चाहिन्छ भने अलिकति खर्च गर्नुपर्छ भन्छन। काम मिलाइदिन्छु भन्ने नेपाली दलाल गल्लिगल्लिमा हुँदारहेछन। नयाँ नेपाली अलपत्र परेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै वरिपरि घुम्ने, अनि 'सब मिलाईदिन्छु' भन्दै उल्टै पैसा माग्ने। उता फेरी रसियन पुलिसले देख्यो कि दुख दिन खोज्छ। हरेक पल्ट ४-५ हजार रुबल (करिब ८ हजार रुपैंया) घुस नखाई छोड्दैन। नेपालबाट ल्याएको खर्च सकियो। काम खोज्न भाषा आउँदैन। बल्ल बल्ल एक ठाउँमा इन्डियनको पसल रहेछ। अनेकौं बिन्तिभाउ गरेपछि काम दियो। दिनभरि काम गरेपछि बेलुका त २ प्याकेट पाउरोटी दिएर यहि हो तेरो ज्याला भन्यो। बढी बोलिस भने पुलिस बोलाईदिन्छु भन्यो, उपाए केहि नदेखेपछि मनमा राँको बालेर चुपचाप त्यहि २ प्याकेट लिएर गईयो।
यताबाट अब पोर्चुगल भाग्न मिल्छ, स्विडेन गए मोज हुन्छ, लाट्भिया त काईदा छ, भन्नेजस्ता हल्ला बिहान बेलुकै साथीहरु सुनाउँछन्। कहिले पोर्चुगलको कार्ड मिलाईदिन्छु, कहिले स्पेनको कार्ड मिलाईदिन्छु भन्दै अनेकौं नेपाली देखापर्छन, रसियन मुस्तण्डेका साथमा। खै, कहाँ गए गजब हुने हो, कुन बिरानो मुलुक पसे मोज हुने हो, मेसोमेलो आएको छैन। आफ्नै घरको भात खाएर 'गम्छा हालेको कुर्चीमा' बस्ने सहकारीको जागिर छोडेर आईयो, अब त दिनको एक पल्ट त्यहि भात मात्रै खान पाए नि हुन्थ्यो झैं लाग्छ।"
दुखको पोको फुकायो उसले।
"भाइ त्यसरी भागेर अरु देश पस्ने आईडिया चाहिँ नगर्नुहोला। युरोपमा यसै त शरणार्थी समस्याले नियम झन् कडा गर्दैछ, त्यसमा पनि भोकै, प्यासै यो चिसोमा भागेर हिंड्दा बाटोमै कतिको मृत्यु भएको छ। हावा, पानी, वाताबरण फरक छ। कति जना रोगि भएर फर्केका छन्। अघिल्लो महिनामात्रै एकजना नेपालीको मृत्यु भएर नेपालमा लाश फर्काउन चन्दा उठाउनु पर्यो। मृत्युको कारण अज्ञात भनिएको छ। नेपाली दाजुभाइलाई त्यो अबस्थामा देख्दा दुख्ख लाग्छ। नेपालका परिवार सम्झिनुस, आफूलाई मायाँ गर्नेहरु सम्झिनुस। बैधानिक बाटोबाट विदेश जाँदा धेरै सजिलो हुन्छ। अर्काको देशमा बिहान बेलुका लुकेर हिंड्ने, लुकेर काम गर्ने गरेर कति पैसा जोगिन्छ होला र! जुन दिन फेला पार्छ, त्यहि बेला डिपोर्ट हान्दिन्छ।
बैधानिक तरिकामा आउनेलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, तर अबैधानिक तरिकाले पस्नेलाई सहयोग गर्न खोज्दा आँफै फसिन्छ। नेपाल फर्किनुस। केहि समय परिवारसंग टाईम बिताउनुस। भर्खर २२ बर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ, थोरै मिहेनत गरि अईएल्ट्स, टोफेल दिनुस, अनि राम्रो कलेज छानेर एप्लाई गर्नुस। युरोप वा अमेरिकामा कहिँ भर्ना पाउनुभयो भने पढाई पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ। हैन भने कुनै राम्रो मेनपावर छान्नुस, श्रम स्वीकृति भएको देशमा बैधानिक हिसाबमा काम गर्न जानुस। १५-१६ लाख तिरेर, त्यैपनि लुकेर भागेर किन अर्काको देश पस्ने? हार्ने ग्यारेन्टी भएको जुवा खेलेझैं भयो यो त।"
यस्तै यस्तै बातचित धेरैबेरे चलिरह्यो।
ऊ अलिकति कन्भिन्स भए झैं लाग्यो। अब नेपाल फर्केर के गर्ने त? अर्को प्रसंग सुरु भयो।
फर्केर केके गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो विकल्पहरु पनि सुनायो। तिनै धेरै बिकल्पमध्ये किन किन मलाई चाहिँ ’राजनीति गर्नुस’ भन्न मनलाग्यो। "बिध्यार्थी राजनीति अलिअलि गर्नुभएकै रहेछ कलेजमा। गाली खान, तालि खान शरम पक्कै लाग्दैन होला। यहाँ फोकटमा रसियनमा गाली खानुभन्दा त नेपाली गाली पचाउन सजिलो।" मैले यस्सै जिस्क्याउनकै लागि डाइलग मारें।
"ह्या दाइ, अब राजनीति सुरु गरेर कहिले नेता हुनु? कहिले कमाउनु, कहिले देश विदेश घुम्नु। बिहे पनि गर्नै बाँकी छ।”
"नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै अफ-सिजन लागेको थाहा छ? कहिले कुनै राजनितिज्ञ 'डिप्रेस' भएको सुन्नुभएको छ? विदेश घुम्ने रहर रहेछ, ठिकै छ। कुनै आई.एन.जी.ओ समातेर सबै देश घुमेकै छन् नेताहरुले। न पैसाको हर्ज, न पावरको। अहिल्यै सांसद, मंत्री भईदैन। तर जिल्ला नेताको अघिपछि घुमे मात्रै पनि बाईक चढ्न र मासुभात खान पाईन्छ। राजनीतिमा लाग्नुस, पछुताउनु हुन्न। अब कुन पार्टीमा लाग्ने, कसरि घुस्ने आदि इत्यादिको लागि कोहि अनुभवी माछे समात्नुस। तैपनि सोच्ने पर्दैन, आजकल सबै पार्टी एउटै हुन, खालि झण्डा फरक हो!”
अहिल्यै नेपाल फर्केर राजनीति सुरु गर्नुस, म यहाँ इन्जिनियरिङ सकेर १-२ बर्षमा फर्किउन्जेल तपाइँ केहि न केहि पदमा पुगिसक्नुहुन्छ। सके त मैले जागिर माग्न तपाइँकै फोर्स लगाउन पर्नेहुनसक्छ!" म हासें। ऊ फेरी हाँस्यो।
सुरुमा युरोपको अरु देश कसरि छिर्ने भनेर उत्सुक रहेको मान्छे, राजनीतिको कुरो आएपछि धेरै बोलेन। उसंग अरु प्रश्न सकिएजस्तो देखियो।
"ल भाइ, जहाँ रहेपनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। तपाइँभन्दा तपाइँको चिन्ता धेरै गर्ने घरका बुबाआमा सम्झिनुस।" भनेर बिदा मागें। हँसिमजाकमा यसै राजनीतिमा जान सल्लाह दिएँ भनेर आँफैलाई नराम्रो लाग्यो। फोन राखेपछि धेरैबेर म आँफै जिल्ल परेरहें।
माथिको बार्तालाप भएको धेरै महिनापछि अस्ति मात्र पत्रीकामा उसको फोटो देखें, नयाँ खुलेको एउटा पार्टीको बिध्यार्थी नेता भएछ। पाखुरामा ट्याटु हानेका उसका दुई 'सहयोगी' पछाडि उभिएका थिए। अब आउने चुनाबमा उसको पार्टीले बहुमत ल्याए देश कसरि बदलिन्छ भनेर जोडदार भाषण दियो रे!
at 9/30/2016 1 comment:
एक NRN अनुभव
'हेल्लो साथी, हामीले एउटा नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने बिचार गर्दैछौं, यसो ८-१० लाख सहयोग गरिदिनुपर्यो।'
"भाइ, यहाँ एउटा राम्रो जग्गा फेला परेको छ, सबै ब्यवस्था भयो तर अलिकति (त्यस्तै ५-७ लाख) पुगेन, अर्को हप्तासम्म यसो पुग्न दिन सकिन्छ त?'
यस्ता सन्देशहरु आजकल प्राय: हप्ताको एक दुर्इवटा इमेल वा फेसबुकका इनबक्समा आराख्छन्। आफ्नै साथीभाइ, नजिकका आफन्त हुन, ठाडो भाषामा नकार्न सकिन्न। तर "हस" भन्नको लागि आफ्नो कमाईले दिँदैन। अँझ नेपाल जानेबेलातिर त साथीभाइको डिमाण्डको लिस्ट हेर्दैमा दुर्इ दिन लाग्छ। यो आम कथा हो सबै प्रवासीको। आफूले किनेर नचलाए पनि नेपालका अधिकांश आफन्तजनका हातमा नयाँ मोडेलका स्मार्टफोन, क्यामरा र ल्यापटप पुर्‍याएकै छन् बाहिर हुने नेपालीले। नेपालमा प्राकृतिक बिपत्ति पर्दा, आफ्ना गाउँ जिल्लामा केही आयोजना बन्दा, प्राय सबै प्रवासीले आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म सहयोग गरेकै छन्। आफूलाई भने यी सबभन्दा एक कदम अघि बढेर "एन.आर.एनको मान्छे भएर पनि यति जाबो पैसा सहयोग गर्न नसक्ने" भन्दै नराम्रो स्माइलीसहित म्यासेज आउँदा एकछिन खिन्न हुन्छ।
प्रवासी नेपालीहरु एक सुत्रमा बाँधिउन्, हक अधिकार सुनिश्चित होस्, सहयोग गर्दा पनि एक ढिक्का भएर गर्न सकियोस, आफ्नो कला संस्कृति जीवन्त राख्न सकियोस भनेर गैर आवासीय नेपाली संघ (एन.आर.एन) गठन भएको हो। तर यसबारेमा आफूलाई विदेश आउनु अघि खासै थाहा थिएन। एन.आर.एन भनेका उपेन्द्र महतो र जिवा लामिछानेहरु हुन्, जोसंग गनेरै नसकिने पैसा हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। पत्रिकामा एन.आर.एन सम्बन्धि समाचार आउँदा टाँसिएर आउने जम्मा दुर्इवटा प्रसंग हुन्थे- एउटा, लाखौँ करोडौंको सहयोगको कुरा, अर्को दोहोरो नागरिकता। दोहोरो नागरिकता किन मागिरहन्थे, सरकारले चाहिँ किन दिँदैनथ्यो, त्यो चासोको बिषय थिएन। जे होस्, करोड करोडका दरले मुलुकमा पैसो भित्रिएको छ, त्यो कुरा रमाइलो लाग्थ्यो। इन्जिनियरिङको पढाई सकिनै लाग्दा बडेमानका सपना एउटा ल्यापटपमा कोचेर साँझपख शंकमुलको मम: पसलमा बसेर हामी तर्क बितर्क गर्थ्यौं, युरोप अमेरिकामा कार्ड बनाएर बसेका मान्छे यो जाबो झुसे नेपालको नागरिकताको लागि किन रोइकराई गरेका होलान? विदेशमा कार्ड बनाएर 'सेटल' हुन छोडेर नेपाली नागरिकताको माया गर्नु त मूर्खता हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्थ्यो। नेपाल के कति कारणले बस्न लायक छैन भनेर हामीसंग १०१ कारणहरु थिए। मम:को अर्को बाहान तयार नहुन्जेल थियो त्यो गफ। हररर बाफ उड्ने गरी ढकनी खोलेपछि विदेशका सबै सपना मम:का डल्ला र सुपमा मिसिन्थे।
केही समयअघि युरोपको सबभन्दा सिरानको देश फिनल्याण्ड आउने मौका जुर्यो। भन्नै पर्दैन, युरोपका लगभग सबै देशको अंग्रेजी भाषासंग खासै साइनो छैन। कामको लागि सबैभन्दा अप्ठ्यारो यहिँबाट सुरु हुन्छ। बस्न, खान, काम खोज्न, ठेगाना थाहा पाउन विदेशमा सबैभन्दा भरपर्दा माध्यम र सहयोगमा जुट्ने पुराना साथीभाइ हुन। नभए, साथीको साथी। त्यो पनि नभए साथीको काकाको छोराको साथी। अन्त्यमा कोही नभेटिए हामी नेपाली नाता खोज्नमा सिपालु छौं, एउटै जिल्ला, मिल्ने थर, एउटै अन्चल, जसरी पनि साइनो गाँस्छौ। यस्तो बेलामा एउटा आश संधै रहँदोरहेछ, एन.आर.एन जस्तो संस्थाले फ्याट्ट एउटा काम खोजेर लगाइदिए त हुने नि। एन.आर.एन भनेको पैसावालहरुको क्लब हो, नेपालका मन्त्री, सांसद समेत किन्ने हैसियत राख्छन्, आफ्नै प्राइभेट जेट चढेर नेपाल जान्छन्, आदि जस्ता कथाहरु नेपाल हुँदा सुनेको हो। तर त्यसैबखत संजोगले भेटिएका एकजना एन.आर.एन फिनल्याण्डका सदस्य आफै काम खोज्दै भौंतारिंदै रहेछन्। पढाई सकिएको रहेनछ, बस्ने ठाउँको पनि टुंगो रहेनछ। उनको कथा पनि सुनिसकेपछि लाग्यो, अहो.… बिजोग रहेछ।
विदेश गएपछि त कुनै नेपालीको सम्पर्कमा रहन्न, गुमनाम भएर बस्छु, सकेसम्म धेरै विदेशीको संगत गर्छु भन्ने लाग्थ्यो। असलमा आफ्नो सजातीय गुण निस्कियो। आएकै २ महिनामै दशैं कार्यक्रममा सरिक भएको थिएँ। टिकाको दिन स्काईपमा घरमा टिका लगाएको हेरेर भक्कानिएँ। अनि नेपाली खोज्दै कार्यक्रमस्थल पुगें। मादल ठोकेर झ्याउरे भाका बज्न थालेपछि आफ्नो घर गोरखा छोप्राक पारिपट्टिको गुरुङ गाउँ सालबोटको झल्को आयो,अनि मनलाई आनन्द मिल्यो। पहिलोपल्ट एन.आर.एन लाई धन्यबाद दिएको त्यही बेला थियो, घरै बिर्साउने रमाइलो कार्यक्रम गरेकोमा।
अहिले आँफै एन.आर.एन फिनल्याण्डको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गर्न थालेको ३ बर्ष पुग्यो। समितिमा रहेका सबै पदाधिकारीलाई हेर्छु, कोही पनि नेपालमा बसेर आफूले अन्दाज गरेको पैसावालहरुको क्लबका सदस्यजस्ता लाग्दैनन्। न यिनको भुँडी छ, न पैसा र पावरका ठूला ठूला कुरा गर्छन्, न एक पक्ष र अर्को पक्ष भन्दै मारामारी गर्छन्, न कोषमा लाखौँ पैसा छ। बर्षभरिमा कोषाध्यक्षले बार्षिक आय व्यय सुनाउँछन् र भन्छन् 'एन.आर.एन फिनल्याण्डको कोषमा अब २५० युरो बाँकी छ'। नेपालमा कुनै आर्थिक सहयोग जुटाउन परेमा मात्रै चन्दा संकलन गर्ने प्रावधान छ। त्यही पनि उठाएको केही महिनाभित्रै पठाइसक्नु पर्छ। महिनामा एकपल्ट हुने साधारण मिटिङमा कालो चिया पनि आफै जुटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ धेरैपल्ट। नेपालमा बार्षिक सम्मेलन हुँदा, युरोपियन क्षेत्रीय भेलाहरु हुँदा सम्पूर्ण खर्च आफैले ब्योहर्नु पर्ने हुन्छ। तलबबाट खर्च बचाउन सकिन्छ भने सम्मेलनमा भाग लिन जाने, नत्र 'प्राबिधिक कारण' देखाउँदै क्षमायाचना गर्नुको बिकल्प रहँदैन। अधिकांश सदस्य ३०-३५ बर्षका हुनुहुन्छ, एकाध मात्रै ५० आसपासका। रेस्टुरेन्ट ब्यवसाय प्रतिनिधित्व गर्दै केही अनुभवी र खारिएका सदस्यहरु हुनुहुन्छ। पेशागत रुपमा हेर्दा इन्जिनियर, प्रोफेसर, नर्स, निजी कम्पनीका जागिरे र केही स्वतन्त्र ब्यवसायी छन्। नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलका नेता निम्त्याइएका छैनन्। कहिँ कतै सहयोग जुटाउन परेको खण्डमा खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यीक जमघट, आदि गरिन्छ र रकम जम्मा गरिन्छ। रमाइलो र समाजसेवा संगसंगै अघि बढ्दैछ।
केही वर्षअघि स्पेनको बार्सिलोनामा युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलन थियो। पद र प्रतिष्ठाकै लागि ठूला होटलको बसाई, जम्बो टोलीको सहभागीता र ठूलो रकम दान दिने घोषणा गर्ने चलन रहेछ। केही प्रतिनिधिले कुनामा लगेर सोधे- 'तपार्इहरुको एन.आर.एन कुन पार्टीको हो? हामी अवाक भयौं र भन्यौं- यो पनि कुनै पार्टीको हुन्छ र ? हामी त स्वतन्त्र पेशाकर्मी र ब्यवसायी छौं, राजनीतिको कुरो अहिलेसम्म निस्किएको छैन।' त्यसपछि अनेक पार्टीका अघोषित एजेन्टले संगठन खोल्न लबिङ् गर्न थाले। कसैको अफर स्वीकार नगरेपछि एक प्रतिनिधिले गायत्री मन्त्र कानमा फुकेझैं भने- 'यसरी त एन.आर.एन चल्दैन। राजनीतिक दलसंग आबद्ध हुनुपर्छ, फाइदा लिन जान्नुपर्छ, नत्र तपाइहरुलाई कसैले गन्दैन।' हामी जिल्ल परेर फर्कियौं।
फिनल्याण्डमा एन.आर.एन स्थापना भएको करिब ६ बर्ष भएको छ। थोरै जनसंख्या, बजेट अभाव, समाजसेवामा आउन चाहनेहरु कमीऽ आदि कारणले अमेरिका, बेलायतहरुमा जस्तो अपेक्षाकृत हल्लाखल्ला छैन। हरेक चिजमा ग्ल्यामर चाहिँदो रहेछ, कि त पावर, कि त पैसाको। सहयोग गर्न तम्सिने सहृदयी मनहरुमात्रै बोकेको संस्थाको रंग 'ब्ल्याक एण्ड व्हाइट' हुँदो रहेछ। 'ग्ल्यामर'वालाहरुको चाहीँ रंगीन। त्यसैमाथि आम दाजुभाइहरुले यति ठूलो अपेक्षा राखिदिनुहुन्छ राजदूताबासले गर्न नसक्ने कामहरु पनि एन.आर.एन ले नै गरोस भन्ने सोचिदिनुहुन्छ। देश अनुसार नाफारहित संस्था स्थापना गर्न पाउने भिन्दाभिन्दै स्थानीय नियमहरु हुन्छन्। यसका आफ्नै अधिकार र कानुनी सीमाहरु छन्। कति साथीहरुले बुझेर, कति साथीले नबुझेर सबै संस्थालाई एउटै नराम्रो ट्याग भिराइदिन्छन्। कुनै बेला रमाइलो लाग्छ, कुनै बेला नरमाइलो। आफ्नो कला, संस्कृति र भाषाको न्यास्रो मेटियोस् भनेर बेला बेलामा नेपालका कलाकारहरु निम्त्याइन्छन्। धेरै युवा समेटिने गरी भलिबल, फुटबल, म्याराथन जस्ता खेलकुद प्रतियोगिताहरु हुने गर्दछन्। साहित्यीक जमघट र हाजिरी जवाफजस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् जसकराण फरक स्वाद होस्। रमाइलोसंगसंगै उठेको रकमले नेपालमा स्कुल बनेका छन्, अपाङ्गका लागि छात्राबास बनेका छन्, भूकम्पपीडितलाई सहयोग जुटेको छ, बिचल्लीमा परेकालाई घर फर्काइएको छ। तर पनि हामी नेपालीलाई व्यक्तिगत आक्रोश पोख्न र 'फ्रस्टेसन' उतार्न केही न केही चाहिँदो रहेछ। नेपालमा नेतालाई गाली गर्दा मन हलुङ्गो हुन्छ, बिदेशमा एन.आर.एन जस्तो संस्थालाई।
धेरै देशबाट समाचार आइरहन्छन्- एन.आर.एनको चुनावमा मारपिट, विवाद, घोटालाको कुरा। देशको घिनलाग्दो राजनीतिबाट आजित भएर, परिवारबाट धेरै टाढा, बडो दु:ख गरेर आर्जेको रकम, अलिकति राम्रो कामका लागि खर्चिन पनि फेरी उही घिनलाग्दो खेलको विधि? यसले एन.आर.एन मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीका हितका लागि खोलिएका जुनसुकै सँस्थामा पनि विश्वास राख्ने ठाउँ रहँदैन। ७० भन्दा बढी देशमा फैलिएको ठूलो संस्थाको एउटा सानो इकाईको एउटा कान्छो सदस्य, जो आफ्नो पढाई र कामबाट बचेको समय, पैसा र श्रम खर्चंदै यसमा लागेको छ, केही सीमित व्यक्तिहरुको आचरणले सिङ्गै संस्थाप्रति आम मानिसको बेफ्वाँकको नकरात्मकता देख्दा निको लाग्दोरहेनछ।
[पौष १२ को सेतोपाटी मा प्रकाशित - http://goo.gl/DjMGVp
Labels: एक NRN अनुभव
नेपाली चेली “खादिजाह तामाङ्”
“सलाम वालेकुम खाबीर भाइ”
[पोखराबाट निस्किने समाधान दैनिकमा प्रकाशित : http://goo.gl/YyrRT4 ]
Labels: नेपाली चेली “खादिजाह तामाङ्”